Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 493930 times)
« Reply #520 on: July 27, 2011, 06:36:56 PM »
မြန်မာလူမျိုး သဘောင်္သားလူငယ်တစ်ဦး သဘောင်္ပေါ်ကခုန်ချပြီး ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ စက်ရုံတစ်ရုံမှာ အလုပ်သွားလုပ်ပါတယ် ။ အလုပ်က
သက်လည်းသက်သာပြီး လစာကလည်းကောင်းတဲ့အလုပ် ။ ဒါပေမဲ့ ကိုရီးယားစကားကလည်း သိပ်နားမလည်တော့ ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ပေါ့ ။
အလုပ်ဝင်ပြီး ( ၃ )ရက် အကြာ.....
လူငယ် ။ ။ အန်ညောဟာဆဲလ်ယို ဆာဂျမ်းနိမ်း ( မင်္ဂလာပါ သူဌေး )
အလုပ်ရှင် ။ ။ ယဲ အန်ညော ( ဟုတ်ကဲ့ မင်္ဂလာပါ )
အလုပ်ရှင် ။ ။ အီးလ် ဟဲမျောင်း ဟင်းသရောလ် ( အလုပ် လုပ်ရတာ ပင်ပန်းလား ? )
လူငယ် အံ့သြသွားတယ်.....ငါ " ဟသာင်္တ " သားမှန်း သူဘယ်လိုသိပါလိမ့်ပေါ့ ။
လူငယ်က " ဟင်းသရောလ် " ကို " ဟသာင်္တ " လို့ ထင်မိပြီး ...ဟုတ်တယ် ကျွန်တော် " ဟသာင်္တ " သားပါလို့ ဖြေလိုက်ပုံက ...
လူငယ် ။ ။ ယဲ ဟင်းသရောလ်ယို ( ဟုတ်ကဲ့ ပင်ပန်းတယ် )
ဒါနဲ့ သူဌေးက ဆက်မေးတယ် အရမ်းပင်ပန်းတာလားပေါ့ ( လက်ဟန်ခြေဟန်တွေလည်း ပါတာပေါ့ )
အလုပ်ရှင် ။ ။ ဂျုံးမားလ် မန်နီး ဟင်းသရောလ် ( တကယ် အရမ်းပင်ပန်းတာလား ? )
လူငယ်က သူဌေးရဲ့လက်ဟန်ခြေဟန်ကို ကြည့်ပြီးတွေးမိတာက... ဒါဟာ ငါတို့ " ဟသာင်္တ "မြို့ကြီးက အကြီးလားလို့မေးတာ
ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး...( ဟုတ်တယ် " ဟသာင်္တ "မြို့ကြီးက အကြီးကြီး ) ဆိုပြီး ပြုံးပြုံးလေး ဖြေလိုက်ပုံက ...
လူငယ် ။ ။ ယဲ မန်နီး ဟင်းသရောလ်ယို ( ဟုတ်ကဲ့ အရမ်းကို ပင်ပန်းတယ် )
သူဌေးက ဒီလိုတွေးမိတယ်...ဒီလောက် သက်သာတဲ့အလုပ်ကိုတောင် ပင်ပန်းတယ် ပြောပုံထောက်တော့ ဒီကောင် ငပျင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး
အလုပ်ရှင် ။ ။ အီးလ် ဂုမန်းဟဲ ၊ နောခါ ( မင်းသွားတော့ အလုပ်မလုပ်နဲ့တော့ )
လူငယ် ။ ။ မအူမလည်နဲ့ .......ယဲ ( ဟုတ်ကဲ့ တဲ့ )
« Reply #521 on: July 28, 2011, 10:18:45 AM »
ဆရာ ကျားဘညိမ်းဟာ မြန်မာ့ လက်ဝှေ့ကျော် ဘ၀နဲ့ နိုင်ငံတကာကို အတော်များများ ရောက်ဖူးပါတယ်။သူ့ရဲ့ (အိန္ဒိယ၊ မြန်မာ)ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဟာသ တစ်ခုကို သတင်း ဂျာနယ်တိုက်မှာ ခုလိုပြောပြပါတယ်။ “ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလက်ဝှေ့ အဖွဲ့နဲ့ အိန္ဒိယ လက်ဝှေ့အဖွဲ့ ချစ်ကြည်ရေး လက်ဝှေ့ ယှဉ်ပြိုင်ကြတာ နိုင်သူနိုင်၊ ရှုံးသူရှုံးပေါ့။ ပွဲအစီအစဉ်တွေပြီးလို့ ဈေးထွက်ဝယ်တဲ့ အချိန်က ခဏပဲရတယ်။ အိမ်ပြန် အမှတ်တရ ပစ္စည်းလေးတွေ ၀ယ်ဖို့ ကိုယ်ပါတဲ့ ငွေနဲ့ချိန်ရတယ်။ တစ်နေရာရောက်တော့ ဖော့ဦးထုပ်တွေ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေ့တယ်။
“အတော်ပဲ ဖော့ဦးထုပ်က တို့ဆီမှာလည်း ဆောင်းကြတယ်ဆိုပြီး ဈေး မေးကြည့်တယ်။ ဈေးသင့်တာနဲ့ ဦးထုပ် အလုံးနှစ်ဆယ် ၀ယ်လိုက်တယ်။ မွန်ဘိုင်းလိုမြို့တစ်မြို့က ထုတ်တဲ့ ဖော့ ဦးထုပ်တွေ။ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တဲ့ အခါ မိတ်ဆွေတွေကို ဖော့ဦးထုပ်တွေ အမှတ်တရပေးလိုက်တယ်။
“အဲဒီမှာ တစ်ယောက်က ကိုဘညိမ်းရယ် ဒီဦးထုပ်တွေ ဟိုက ၀ယ်လာတာမှ ဟုတ်ရဲ့လား၊ ဒီရောက်မှ ၀ယ်ပေးတာ မဟုတ်လားလို့ ပြောတယ်။ တကယ် ဟိုက ၀ယ်လာတာပါလို့ ပြောတော့ ကိုယ့်လူ ရွှီးမနေနဲ့။ ဟောဒီ ဦးထုပ်က စာဟာ သက်သေပဲလို့ ပြောပြောဆိုဆို ဦးထုပ်ကို ပြတယ်။
“ဦးထုပ်ကို အသေအချာ ကြည့်လိုက်တော့ မွန်ဘိုင်းလို အိန္ဒိယမြို့တစ်မြို့က လုပ်တယ် ထင်ထားခဲ့တာ၊ စာတန်း ထိုးထားတာက မိတ်အင် မုံရွာတဲ့ဗျား။
ကျွန်တော်က တိုက်ပေါင်းစုံမှာ ကာတွန်း ဆွဲနေတာမို့ အဲဒီလို နေရာတွေမှာ ဆရာ ကျားဘညိမ်းနဲ့ မကြာခဏ ဆုံတယ်။ တစ်နေ့ မြ၀တီတိုက်မှာ ပန်းချီ ကာတွန်း ဦးစိန်နဲ့ဆုံတော့ “ကိုဘညိမ်း (ကျားဘညိမ်း) နေရာကို လူသစ် တစ်ယောက် ခန့်ထားလိုက်တယ်တဲ့။ ရာထူးက လက်ဝှေ့ နည်းစနစ်မှူးပေမယ့် အဲဒီလူက လက်ဝှေ့ မထိုးတတ်ဘူးတဲ့” လို့ ပြောပါတယ်။ ကြားရသူ အပေါင်းက ဒါမျိုးလည်း ရှိသကိုးလို့ ရေရွတ်မိကြတယ်။
နောက်လထုတ် မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ ဦးစိန်ရဲ့ ကာတွန်း တစ်ပုံပါလာပါတယ်။ လူနှစ်ယောက် လက်ဝှေ့ ထိုးကြရာမှာ တစ်ယောက်က ကင်းမြီးကောက်ထောင် ထားပြီး ခြေထောက်နှစ်ချောင်းမှာ လက်ဝှေ့အိတ် စွပ်ထားကာ၊ ကျုပ်က လက်နဲ့ မထိုးတတ်တော့ ခြေနဲ့ ထိုးမယ်လို့ ပြောနေတဲ့ပုံပါ။ ဒါဟာ ဆရာကျားဘညိမ်း ရဲ့အဖြစ်ကို အခြေပြု ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ကာတွန်းဖြစ်ပါတယ်။
Written by ငွေကြည်
« Reply #522 on: July 28, 2011, 10:22:55 AM »
ဆရာ ကျားဘညိမ်းဟာ လက်ဝှေ့ ထိုးသတ်ရာမှာ ကျားတစ်ကောင်လို ရဲရဲရင့်ရင့် ထိုးသတ်တတ်ခြင်း၊ ရွှေကျား လက်ဝှေ့ကလပ် ထောင်ပြီး လူငယ် လက်ဝှေ့သမားတွေ မွေးဖွားပေးခြင်း အပြင်၊ အင်္ဂလိပ် ၁၂ ကောင်ကျားထိုး ရာမှာလည်း ကျွမ်းကျင်ခြင်းတွေကြောင့် ကျားဘညိမ်းလို့ ခေါ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟာသက ကျားထိုးခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဟာသပါ။
“တစ်နေ့တော့ ပဲခူးက လူတွေနဲ့ ကျားထိုးဖို့ ချိန်းထားလို့ ဆိုင်ကယ်စီး ပြီးထွက်ခဲ့တယ်။ ကျုပ်ဆိုင်ကယ်က ဟာလေဒီဗက်ဆင် ဆိုင်ကယ်ကြီး၊ စိတ်တိုင်းကျ ရွေးဝယ်ထားတာ၊ အင်ဂျင်မာတယ်၊ အရမ်းမြန်တယ်။ မြန်သမှ ၃ နာရီလောက်ခရီးကို ၁ နာရီခွဲလောက်နဲ့ ရောက်တယ်”
စကားခဏရပ်ပြီး ဆရာကျား ဘညိမ်းက ပြုံးတုံးတုံးလုပ်နေပါတယ်။ ပြီးမှ စကားဆက်တယ်။ “ဒီလိုနဲ့ ပဲခူး ရောက်ရော။ ပဲခူးက ကျားချန်ပီယံတွေ ကျွန်တော်နဲ့ လက်ရည်စမ်းတယ်။ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် နောက်ကောက်ကျ ကုန်တယ်။ ပွဲစဉ်တွေများတော့ ညနေ ၅ နာရီမှ ပြီးတယ်။ နေကလည်း ၀င်တော့မှာမို့ အိမ်အတွက် ခေါက်ဆွဲထုပ် ၀ယ်ပြီး ဆိုင်ကယ်ကို တရကြမ်းမောင်း ပြန်ခဲ့တယ်။ ဘယ်နှ မိုင်နှုန်းနဲ့ မောင်းခဲ့လဲတောင် မသိဘူး။ အိမ်လည်း ရောက်ရော ခေါက်ဆွဲထုပ်ကို မိန်းမ လက်ထဲပေးလိုက်တယ်။ ခေါက် ဆွဲထုပ်က ပူနွေးနေတုန်းပဲ”
စကားဝိုင်းက လူတွေအဖို့ မိုင် ငါး ဆယ်လောက်ဝေးတဲ့ ခရီးကိုပြန်ရောက်တဲ့ အထိ ခေါက်ဆွဲထုပ်က ပူနွေးနေအောင် သူ့ဆိုင်ကယ် ဘယ်လောက်တောင် မြန်လဲလို့ စဉ်းစားစရာဖြစ်ကုန် ပါတယ်။ ပြီးတော့
“ဒါတော့ လွန်ပြီဗျာ၊ ခင်ဗျားဆိုင်ကယ် ဘယ်လောက်မြန်မြန် မိုင်ငါးဆယ် ခရီးကို လေထုထဲဖြတ်မောင်းလာရ တာ၊ ခေါက်ဆွဲထုပ် အေးသွားမှာ သေချာတယ်။ ပူစရာ အကြောင်းမရှိဘူး”
ဒီအခါ ဆရာကျားဘညိမ်း ပြောလိုက်တာက “ပူပါတယ်ဗျ၊ ပူဆို ကျုပ် က ခေါက်ဆွဲထုပ်ကို ဆိုင်ကယ်အိပ်ဇော ပိုက်မှာ ချည်ပြီး မောင်းလာတာဗျ” Written by ငွေကြည်
« Reply #523 on: July 28, 2011, 11:22:23 AM »
Franklin Delano Roosevelt အမေရိကန်သမတ္တ မဖြစ်ခင် နေအိမ်တွင်အခိုးခံရဖူးသည်။သူငယ်ချင်းများက အကျိုး
အကြောင်း လာရောက်မေးမြန်းကြသည်။ Roosevelt က ထိုသို့ ပြန်ဖြေလေသည်။
“လာရောက်မေးမြန်းကြတဲ့ အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်.ကျွန်တော်
သူခိုးဟာ ကျွန်တော်ရဲ့ ပစ္စည်းတွေခိုးသွားခဲ့ပေမဲ့ အသက်ကို ရန်မရှာခဲ့ဘူး…
ပစ္စည်းတွေ ခိုးသွားခဲ့ပေမဲ့ အကုန်လုံးကို ခိုးမသွားခဲ့ဘူး….
ကျွန်တော် ၀မ်းအသာဆုံးက သူခိုးဟာ တစ်ခြားလူဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်
Winston Churchill (British Prime Minister 1874-1965) တစ်ခါကဟောပြောပွဲတွင် စင်အောက်မှ လူတစ်ဦးကစာတစ်စောင် လှမ်းပေးသည်။ စာထဲတွင် (လူပြိန်း) ဟုသာရေးထားသည်။စင်အောက်တွင် သူ့အား ကန့်ကွက်မည့်
သူများ သူအား အရှက်ကွဲစေရန် လုပ်လိုက်ကြောင်း သူသိလိုက်သည်။ Churchillမှာ ဘာမှ မဖြစ်သည့်ပုံစံဖြင့် …
“ကျွန်တော် စာတစ်စောင် ရလိုက်တယ်… စာရေးသူဟာ စာထဲမှာ အကျိုးအကြောင်း
« Reply #524 on: July 28, 2011, 11:26:59 AM »
တခါက တိုင်းပြည် အကြီးအကဲ တဦးသည် မိမိ၏ နာမည်နှင့် ဂုဏ်ကို မြှင့်
တင်ချင်သည့်အတွက် ကိုယ့်ပုံကို တံဆိပ်ခေါင်းအဖြင့် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ထုတ်ဝေပြီး တလအကြာတွင် ရောင်းအားကောင်းမကောင်း စာတိုက်ကြီး
သို့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက် စုံစမ်းခဲ့သည်။
အကြီးအကဲ….. ငါ့ပုံနဲ့ တံဆိပ်ခေါင်း ရောင်းအား ကောင်းလားဟေ့
စာတိုက်မှုး……ကောင်းပါတယ်……ဒါပေမယ့် တံဆိပ်ခေါင်းကော် သိပ်မ
ကိုယ်တိုင် တံဆိပ်ခေါင်း တခုကို ယူပြီး နောက်ကျောကို တံထွေး ထွေး
ကာ စာအိတ်ပေါ်တွင် ကပ်ကြည့်လိုက်သည်။
စာတိုက်မှုး…….သူတို့က တံထွေးကို တံဆိပ်ခေါင်းရှေ့ ထွေးကြလို့ပါ။
တခါက အကြီးအကဲသည် နောက်လိုက်များနှင့် အစည်းအဝေးအတွက် ခ
ရီးထွက်ကြသည်။ လမ်းတွင် မတော်တဆ ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပြီး အားလုံး
ဆေးရုံသို့ ရောက်သွားကြသည်။ အကြီးအကဲ၏ သတင်းကို မေးမြန်းစုံစမ်း
ရန်အတွက် သတင်းထောက်များ လာရောက်ပြီး ဆရာဝန်အား မေးမြန်းခဲ့
သတင်းထောက်….ဆရာ…ဆရာ..အကြီးအကဲ အခြေအနေ ဘယ်လိုလဲ
ဆရာဝန်……..သူတို့လဲ အခြေအနေ မကောင်းဘူး
သတင်းထောက်……ဒါဆို ဘယ်သူအခြေအနေ ကောင်းလဲ ဆရာ
ဆရာဝန်……..ငါတို့တိုင်းပြည် အခြေအနေ ကောင်းပြီ
« Reply #525 on: July 28, 2011, 11:30:32 AM »
အဖေလုပ်သူက လှေကားပေါ် တက်ကာ ပြတင်းပေါက်များအား ဆေးသုတ်နေသည်ကိုခြောက်နှစ်သား သားငယ်ကဂရုတစိုက် ကြည့်နေသည် ။ အမေကသားကို ပြောတယ် ။
အမေ - သားကြီးလာရင် ဖေဖေ့ကို ကူရမယ်နော်
သား - ဘာလဲ ၊ အဲဒီအချိန်ထိ ဖေဖေက ဆေးသုတ်လို့ ပြီးမှာမဟုတ်သေးဘူးလား
မိန်းမ - ရှင် ၀တ္တု မရေးတာ ကြာပါပကော ၊ ရေးပါအုံးလား
ယောက်ျား - စိတ်မပါသေးဘူးကွာ.
မိန်းမ - သြော်…သားငယ်ကလေယာဉ်ပျံစက္ကူ ခဏခဏတောင်းနေလို့ပါ
« Reply #526 on: July 28, 2011, 11:34:59 AM »
« Last Edit: July 28, 2011, 12:52:14 PM by tunaye2011 »
« Reply #527 on: July 28, 2011, 11:37:04 AM »
« Reply #528 on: July 28, 2011, 11:39:44 AM »
“အော် သိပြီ။ချူချာက ပြောတယ်ဗျ။အခန်းနံပတ် ၂၂ ကို လက်ဘက်၇ည် ၂ခွက် လာပို့ပေးပါ။”
« Reply #529 on: July 28, 2011, 11:45:28 AM »